Diyo post :: मोफसलप्रचारमा जय शम्भु, रात्रिकालिनहोटलदेखीपत्रकार भेटघाट सम्मप्राथमिकता मोफसलप्रचारमा जय शम्भु, रात्रिकालिनहोटलदेखीपत्रकार भेटघाट सम्मप्राथमिकता - Diyo post
काठमाडौं । फिल्म जय शम्भु टिम यतिबेलाफिल्मको प्रचार प्रसारको लागिमोफसलयात्रामा हिँडेका छन् । फिल्म युनिटले शुक्रवार बेलुकापोखराको सबै रात्रिकालिनहोटलहरुमा आफ्नाशुभचिन्तकतथादर्शकहरुलाई फिल्मको वारेमाजानकारी गराएका छन् । उक्तकार्यक्रम सकाएको फिल्म युनिटले शनिबार बिहानपोखरामाआयोजितपत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । फिल्मका टिमले जय शम्भुको वारेमाजानकारी दिएकाहुन् । एक्शन लभस्टोरी भनिएको फिल्मकावारेमाजानकारी गराउनकलाकारहरु प्रशान्तताम्राकार, अनुपविक्रमशाहीलगायतउपस्थितभएकाथिए । नायिकाबर्षा शिवाकोटी भने मौसम खराबका कारण पोखराको उडान हुननसकेपछि काठमाडौंमै रोकिएकीथिईन् । पोखरामा रहेको फिल्मका टिम बुटवल प्रस्थानभएका छन् । बुटवलमानायिकाबर्षा शिवाकोटी पनिउपस्थितहुनेछिन् । शनिबार बेलुका बुटवलका विभिन्नहोटल तथालन्जहरुमागई फिल्मको बारेमाजानकारी गराउनेछन् ।
त्यस लगतै फिल्म युनिट आइतबार बिहान बुटवलमा आयोजनागरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सकाएर त्यहाँबाट चितवन र हेटौंडा तर्फ लाग्नेछन् । चितवन र हेटौंडाको कार्यक्रम सकाएर फिल्म युनिट २८ गते सोमबार काठमाडौं फर्कनेछन् । फिल्म युनिटले पोखराको आधादर्जनभन्दा बढी होटल तथालन्जहरुमापुगेर फिल्मको बारेमाजानकारी गराएकाथिए । पोखराको आधादर्जनभन्दा बढी होटल तथालन्जहरुमापुगेका अनुप र प्रशान्तलाई उनका फ्यानहरुले घेरेर सेल्फीखिचेका थिए । यसै क्रममाफिल्म युनिटले मिस गण्डकीका कन्टेस्टेन्टहरुसँग पनि भेटघाट गरेका थिए । रिलिजमितीनजिकिँदै गर्दाफिल्म युनिटले प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेका हुन् । देशव्यापीप्रचार प्रसारमा देखिएकाफिल्मका टिमले प्रचारको नयाँ शैलीअपनाएकाहुन् । जयशम्भु भाद्र १ बाट रिलिजसँगै एक्शन लभस्टोरी मन पराउने दर्शकको आशा पुरा हुने बताईएको छ ।
दिनेश शाही प्रस्तुतकर्ता रहेको जय शम्भुमा अरविन्द्रमानशाक्यनिर्माताको रुपमा रहेका छन् भने चक्रपाख्रिनकार्यकारी निर्माताको रुपमा रहेका छन् । यस्तै सह निर्माताहरु कुशलशर्माा र शिक्षाकाफ्ले हुन् । फिल्मलाई रुपेश तामाङले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा हरि घले लामाको छायाँकन, श्री श्रेष्ठको एक्शन, टंक बुढाथोकीको संगीत, बनिशशाहको सम्पादन, रामजी लामिछानेको नृत्य रहेको छ । फिल्ममाप्रशान्त, अनुप र बर्षासँगै रोशनमहर्जन, करुणा पाण्डे, रश्मी भट्ट, बसन्त भट्ट, राजकुमार थापा, कालु रानाआदको मूख्यभुमिका रहेको छ । फिल्मलाई राजधानीमा बिके फिल्मकागोपालकाजीकायस्थ र काठमाडौं बाहिर एफडि कम्पनीले वितरण गर्ने भएका छन् ।
प्रचण्डकी नातिनी स्मिताको स्वरमा कार्टुन्ज क्रुको डान्स !
काठमाडौं । कार्टुन्ज क्रुलाई फिचरिङ गरिएको पानी कुवाको बोलको नयाँ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यो उनीहरुले गरेको अहिलेसम्मको ...
‘हेर यि आँखामा’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं– रेडियो नेपालका अंग्रेजी समाचार बाचक तथा प्रसिद्ध गायक महेन्द्र रायमाझीको आवाजमा रहेको ‘हेर यि आँखामा’ बोलको गितको म्युजिक भिडियो ...
चिन गएर प्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्नुपर्छ ! पुर्वप्रधानमन्त्रीको बाबुराम भट्टराईकोे १० बुँदे सुझाव (पुर्णपाठसहित)
काठमाडौँ । पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणको सम्वन्धमा १० बुँदै सुझाव दिएका छन ...
‘हरर’ फिल्ममा ऋचा शर्मा, भन्छिन्,‘ठूलो जोखिम लिएको छु’
काठमाडौं । प्रदर्शनको अन्तिम तयारीमा रहेको चलचित्र ‘सुनकेसरी’ले ढिलो गरी आफ्नो प्रचारप्रसार सुरु गरेको छ । यहि जेष्ठ ११ गते ...
राजेश पायलको गीतमा रविन शाह! पागलको भुमिकामा यस्तो देखिए (भिडियो सहित )
काठमाडौँ । अक्सर धमाकेदार गीतहरुमा अभिनय गर्ने रविन शाह यतिबेला फरक अवस्थाको गीतमा देखिएका छन । राजेश पायल राईको स्वरमा ...
चलचित्र ‘पसले’को छायांकन सम्पन्न
काठमाडौं । निर्देशक राजेन्द्र कुमार अर्याल ‘राजु’ निर्देशित सातौ फिल्म ‘पसले’ को सम्पूर्ण छायांकन सकिएको छ । एनपी फिल्मस् प्रोडक्सन ...
सुदुरपश्चिमेली देउडा लिएर आए गायक विरेन्द्र जोहारी,‘ ‘याँ सम्झिने कोई भएन’ (भिडियो)
काठमाडौं । गायक विरेन्द्र जोहारी नयाँ देउडा गीतका साथ दर्शक स्रोता समक्ष आएका छन् । उनको स्वरमा सुदुरपश्चिमेली देउडा‘ ‘याँ ...
बिष्णु विश्वकर्मा काठमाडौं । बलिउडका हस्ति कलाकारहरुको डिभोर्सको हल्ला व्यापक सुनिन्थ्यो । तर, यतिबेला भने बलिउडलाई समेत पछि पार्दै ...
डिम्पल खरेलको मोडलिङमा ‘ब्रेक फेल’ बजारमा (भिडियोसहित)
काठमाडौं । आधुनिक गीत संगीतको दुनियामा नयाँ समधुर गीत बजारमा आएको छ । म्युजिक नेपालले बजारमा ल्याएको नयाँ ‘मोडर्न पप’ ...